मीना स्वर्णकारको अनुभव : महिलालाई राजनीतिमा आउन अझैं कठिन | Kattwal.com
२६ साउन,काठमाडौं । समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा पनि सोच पुरातनवादी नै थियो । जहाँ सामन्तवादी पितृसत्ता र जातजातीका आधारमा भेदभाव कायमै थियो । ठूला भनिएकाहरुले सानालाई हेप्थे र दबाबमै राख्थ्ये– धनी गरिब र माथिल्लो जात तल्लो जातकै आधारमा । यहि समाजमा जन्म भयो मीना स्वर्णकारको । दाङ जिल्लाको घोराही नगरपालिकामा विं सं २०३१ साल मंसिर ८ गते जन्मिएकी मीना २९ वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । बाल्यकालमै समाजमा व्यप्त सामन्ती सोच, रुढीवादीप्रथा र थिचोमिचो देख्दै र भोग्दै आएकी मीना सधैं यी कुप्रथाको अन्यबारे सोच्ने गर्थिन ।
जमिनदारी प्रथा कायमै हुँदा ठूलाले सानालाई त हेप्थे नै हरेक क्षेत्रमा पहुँजवालको ‘जी हजुरी’ गर्नुपथ्र्याे र सधै ठूलाको अन्डरमा रहनुपथ्र्याे । यहि पुरातनवादी समाजमा हुर्किदै गरेकी मिना उमेरले १६ वर्ष पुगिसकेको थिइन् । यो दौडानमा उनले धेरै कुरा बुझिसकेकि थिइन र उनले अठोट गरिन् यी सबै कुप्रथा अन्त्यको विकल्प राजनीति हो, अब राजनीतिमा सक्रिय बन्छु ।
सामन्तको दमनले राजनीतिमा
उनी राजनीतिमा आउनुको कारण रहर वा बाध्यता चाहिँ थिएन । समाजमा थिचोमिचो थियो, अन्याय अत्याचारले सीमा नाघेको थियो । दमन शोषण उस्तै । त्यसैले समाजमा भएको थिचोमिचो, अन्याय अत्याचार देखेर उनलाई राजनीतिक चेतनाले डोहो¥या
‘सामन्तले गरेको त्यो पीडा, जुन शोषण खप्न नसकेर हामी भित्र भित्रै पिरोलिएर बसीरहेको अवस्थामा, दमित समूदाय र महिलाहरूका पीडा बाहिर आइरहेका थिए तर अधिकार स्थापित गर्न नसकिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई केही मलमपट्टी लगाउन सकिन्छ कि भनेर आफूले केही गर्न सक्छु भनेर राजनीतिमा लागे’ उनी भन्छिन् ‘पार्टी राजनीति र सङ्गठनबाटै समाजका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यहाँ होमिए ।’
परिवार कांग्रेस उनी राप्रपामा
मीना स्वर्णकारको परिवार कांग्रेस समर्थक थियो तर उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागिन । आफू हिन्दूवादी–राजावादी भएकोले राजसंस्था हिन्दूराष्ट्र यो देशमा रहनुपर्छ भनेर नै राप्रपामा लागेको बताउछिन् । मीनाले विद्यार्थीकाल नेपाल विद्यार्थी संघलाई सहयोग गरेकी थिइन । तर, यतिन्जेलसम्म कुनै पार्टीको सदस्यता नलिएकी मीनाले २०४८ जेठ १५ मा राप्रपाका सदस्यता लिइन । उनलाई राप्रपाको भातृसंगठन ‘राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक संठगन’को केन्द्रीय सदस्य जिम्मेवारी पनि प्राप्त भयो । मीनाका लागि यो नै पार्टीले दिएको र पार्टीका लागि काम गर्ने पहिलो जिम्मेवारी थियो ।
त्यसपछि मीना पार्टीमा सक्रिया राजनीति गर्न थालिन् पार्टीको हित र सार्वजनिक विषयका मुद्धालाई जहिल्यै पनि उनले उठाईन् । पार्टीले पनि मुल्यांकन ग¥यो र थप जिम्मेवारी हासिल भयो । राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको केन्द्रीय सचिव हुदै महासचिव हुने मौका पनि उनलाई मिल्यो । यहिमात्र होइन उनको कुशल नेतृत्व क्षमताले पार्टीको जिल्ला सदस्य हुनै केन्द्रीय सदस्यसम्म बनायो । अहिले पनि उनी राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य छिन् । उनको यो दोस्रो कार्यकाल हो, उनी दुवै कार्यकाल निर्वाचित भएर नै केन्द्रीय सदस्य बनेकी हुन् ।
तीन पटक टिकट तर, सांसद बन्ने मौका मिलेन
राजनीतिमा कहिले जित त कहिले हार भइरहन्छ तर, मीनालाई जितको खुशी साट्ने मौका अझै मिलेनको छैन । पाटीले उनलाई तीन पटक समानुपातिक तर्फको टिकट दियो दुर्भाग्य उनी तीनै पटक असफल बनिन । २०६४ को पहिलो संविधानको निर्वाचनमा उनलाई पार्टीले टिकट दियो, ०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि टिकट पाइन् र ०७४ को संघीय निर्वाचनमा पनि उनलाई टिकट मिल्यो । तर कुनै पटक पनि उनलाई सांसद बन्ने मौका मिलेन । समानुपातिकबाट टिकट पाएकाले उनले सांसद बन्न नपाएको उनको बुझाइ छ । ‘थोरै सिट परेकाले मैले टिकट पाइन’ उनले भनिन्–पार्टीभित्र पनि सांसद बन्नको लागि लबिङ गर्नु पर्दाे रहेछ ।’
६४ र ७० को निर्वाचनमा उनले पाउने सम्भावना प्रवल थियो तर पाइनन् । तीनै पटक असफल हुँदा आफ्नो मन कता–कता अमिलो भएको उनी बताउछिन् । यति हुदाँ हुदै पनि पार्टीको सक्रिय राजनीतिबाट पनि उनी एकपाइला पनि पछि हटेकी छैनन् । सांसद बन्न नपाउदा निकै पिर प¥यो, अरु भन्दा पनि पार्टीप्रति नै दुख लागेको उनी बताउछिन् ।
हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था मुल एजेण्डा हो
हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने शक्तिहरु एकजुट हुन सकेनन् । अहिले पनि विभक्त छन्, यो अवस्थामा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको मुद्धा केहि कमजोर छ । र पनि राप्रपा आफुनो मुल एजेडाबाट बिचलित भने भएको छैन । हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था, बिपीको मेलमिलाप र महेन्द्र सरकारको राष्ट्रवादको सोचलाई लिएर पार्टीले मुल एजेण्डा बनाएको उनको भनाई छ । त्यो मुद्धालाई जनताको माझमा पु¥याउन पार्टीले रणनीति बनाइरहेको छ यो मुद्धालाई सफल बनाउने हामी पनि क्रियाशिल भएर लागि रहेका छौं ।
राष्ट्र रहेन भने जनता रहदैनन् । राष्ट्रको लागि सोच्ने व्यक्ति कमै भए । त्यसकारणले गर्दा राप्रापाले यो वा त्यो नभनेर जनताका साझा मुद्धा उठाउनका लागि पृथ्वीनारायण शाहका एकिकरण, राष्ट्रियता नेपालीपन, मेलमिलाप, हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको नारा लिएर पार्टी अगाडि बढेको छ । ‘पार्टीको बैठकले नै पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र र बिपी कोइरालालाई आदर्श मान्ने निर्णय गरेको छ ।’ उनी भन्छिन्– ‘पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश, महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बिपीको मेलमिलाप नीतिलाई राप्रपाले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको छ ।’ राप्रपाले अन्य राजनीतिक दलभन्दा फरक विचार र राष्ट्र निर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेको छ । कांग्रेस र कम्युनिस्टपछि देशव्यापी संगठनात्मक पहुँच र उपस्थिति भएको पार्टी राप्रपा नै हो  ।
राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बोकेका शक्ति एक हुनुपर्छ
आन्दोलन गर्न, संघर्ष गर्न र जायज कुरा उठाउन एक्दै भएर हुदैन । संगठनात्मक तरिकाले गयो भने राम्रो हुन्छ मीना भन्छिन् । त्यसमा हाम्रा नेताहरुले पनि गम्भिर भएर सोच्न जरुरी छ । देशमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकतालाई महशुस गर्दै उनले भनिन्– ‘अविलम्व एकता प्रक्रियामा आउन राप्रपा (संयुक्त) र अन्य राष्ट्रवादी शक्तिलाई हामीले आग्रह पनि गरिरहेका छौं ।’ अहिले जसरी हिन्दू राज्यमाथि विभिन्न तवरबाट आक्रमण भइरहेको छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्न र गतिलो झापड दिन पनि राजसंस्था र हिन्दूवादी शक्तिहरु एक हुनुको विकल्प नभएको उनको बुझाई छ ।
उनको चिन्ता छ– हिन्दू अधिराज्यको लागि सबै शक्ति एकजुट हुन नसकेको खण्डमा हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त हुने डर हुन्छ भने हिन्दूमाथी धावा बोल्नेहरु हावी हुदै जानेछन् । त्यो भएन भने आज यो देशमा झन शक्ति नै हुदैन, उनीहरुकै शक्ति हावी भइराख्ने छ । तसर्थ यो शक्ति बलियो हुनको लागि संगठन नै चाहिन्छ, एकता नै चाहिन्छ, अपनत्व नै चाहिन्छ ।
महिला आफै अगाडी नबढेसम्म जिम्मेवारी नपाउने अवस्था अहिले पनि छ
महिलामा परिवर्तन हुदै नभएको होइन, हिजोका दिन र आज धेरै परिवर्तन भएको छ । समाज परिवर्तनका लागि महिलाहरूले पनि पुरुष समान सङ्घर्ष गर्दै, क्षमता विकास गर्दै आए । तर अझै पनि महिलालाई अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था नहुँदासम्म क्षमताको आधारमा स्थान दिने अवस्था नहुँदा भने उनलाई दुःख लाग्छ ।
संघर्ष र क्रान्तिबाट महिला अधिकार र प्रतिनिधीत्व स्थापित हुन सकेका त छन् तरपनि हरेक ठाँउमा महिलालाई अझै पूर्ण अधिकार दिइएको पाइदैछ । कतिपय अवस्थामा कार्यकारी निकायमा पुगेका महिलाहरूले सन्तोषजनक नतिजा दिन नसकेकोले महिलाको क्षमता नभएको भन्ने आरोप लागे पनि मीना भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन् । प्रतिफलका लागि सामाजिक संरचना, चिन्तन, कर्मचारीको कार्य आदिमा भर पर्ने उनको तर्क छ ।
समाजले हिँजोसम्म पुरुषलाई धेरै अवसर दिएको र महिलाको अनुभव धेरै तल भएकाले यो अवस्थामा एकै पटक प्रतिस्पर्धामा जान समय लाग्ने र समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण नबन्दा सम्म आरक्षणको व्यवस्था रहने उनको भनाई छ । अहिले तीन तहका सरकार बनिरहेका बेला सबै तह र कार्यपालिका र न्यायपालिकामा पनि महिलाको समान अधिकार हुनुपर्ने उनी बताउछिन् ।
यो देशमा महिला पुरुष बराबर हो है भन्ने कुरा अझै आएको छैन, यो कुरा ल्याउका लागि अझै आफूहरु सडकमा रहेको उनी भन्छिन् । आफूले महिलामैत्री समाज निर्माण हुनुपर्छ भनेर पैरवी गर्दै आएको उनी बताउछिन् । ‘महिला अधिकारमा पनि समावेशीको कुरालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु पर्छ ।’ उनी भन्छिन्– ‘महिलाभित्र पनि विविधता रहेको छ त्यसैले हुनेखाने र पहुँच भएकाहरु भन्दा पनि पछाडि पारिएकाले स्थान पाउनुपर्छ ।’
महिलालाई राजनीतिमा आउन धेरै कठिन छ
राजनीति होस् या अन्य क्षेत्र पैसाले मात्रै चलेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पुरुषलाई त राजनीतिमा टिकिराख्न मुस्किल भइरहेका बेला महिलालाई कति कठिन होला आफै अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।
यसमा मीनाको तितो अनुभव छ । उनी भन्छिन्– ‘गाडी–घोडा पैसा नभए पार्टीले समेत पत्याउदैन, यो कारणले महिला अझ आर्थिक अवस्था कमजारे भएकालाई राजनीतिमा टिक्न कठिन छ ।’ राजनीतिक विचार बोकेका महिला समेत पैसा नभएकै कारण पछि परेका छन् । मेरै कुरा गर्ने हो भनेपछि मैले ३–३ पटक समानुपातिकको टिकट पाए तर पैसा नभएकै कारण पार्टीलाई पैसा पेल्न नसकेकै कारण मैले सांसद बन्न पाएन । –मीना गुनासो गर्छिन ।
फेरी हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ, राजनीतिमा लागेको महिलालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने, अनेक लाञ्छना लगाउने गर्नाले पनि महिलालाई राजनीतिमा आउन गाह्रो छ । र राजनीतिमा लागेको महिलाले पनि पार्टीको बोर्ड र कार्यालयलाई हेरेर चिन्त बुझाउनु परेको छ ।
गणतन्त्र आएको हो कि व्यक्तिवादीतन्त्र ?
दुईतिहाईको सरकारले जनपक्षमा काम गर्ला भनेर धेरै नेपाली जनतालाई लागेको थियो । वेरोजगार युवा, महिला, आदीवासी–जनजाती, अल्पसंख्यक र पछाडि पारिएका वर्ग क्षेत्रका लागि काम गर्ला भनेको त झन सिंगो क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको छ । मीना भन्छिन्– सातवटा प्रदेश छन् खै त दलितका मुख्यमन्त्री ? खै त दलित महिलालाई मन्त्री बनाएको ? के ७ प्रदेशमध्ये एउटा पनि प्रदेशमा दलित मुख्यमन्त्री हुन सक्दैन ? कुनै पनि निकायमा दलितको भूमिका छैन, अनि यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्र ? यो देशमा गणतन्त्र आएको हो कि व्यक्तिवादीतन्त्र आएको हो ? यो छुट्याउदै बाँकी छ । किसान मारमा परेका छन्, पिछडिएको क्षेत्र मारमा परेको छ, महिला, मजदूर, युवा मारमा परेका छन् तर पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । जनताको सरकार हो कि पार्टीको वा व्यक्तिको ? के एउटा जातको सरकार हो यो छुट्याउन बाँकी छ । –मीना भन्छिन् । निसानन्युजबाट साभार
किशोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने वृद्धलाई तीन महिना कैद
कोइलाखानीमा बाढी पसेपछि १३ जना मजदुरको मृत्यु भएको आशंका